Dr. Tint Swe's Writings: July 2016
Dr. Tint Swe's Writings ဘလော့မှာလာဖတ်သူ တသန်းပြည့်ကာနီးပြီ
Jul 25, 2016 3:00 AM – Aug 1, 2016 2:00
မနေ့ကဖတ်သူ စုစုပေါင်း 3,005
ယခင်လကဖတ်သူ စုစုပေါင်း 68,518
ဘလော့ဖတ်သူ စုစုပေါင်း 995,215
မြန်မာနိုင်ငံမှ Myanmar (Burma) 10940
ရုရှားမှ Russia 2515
ယူနိုက်တက်စတိတ်မှ UnitedStates 966
စင်္ကာပူမှ Singapore 639
ထိုင်းနိုင်ငံမှ Thailand 416
မလေးရှားမှ Malaysia 277
ပြင်သစ်မှ France 253
ဂျပန်မှ Japan 172
အင်ဒိုနီးရှားမှ Indonesia 125
အိန္ဒိယမှ India 76
ဘလော့ကို ယူအက်စ်အေရောက်မှ အသစ်ဖွင့်ရပါတယ်။ အရင် အီးမေးလ်ကို သုံးမရတော့လို့ပါ။ ၁ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၄ နေ့က စရေးတာပါတယ်။ စာ အတို-အရှည်ပုဒ်ရေ ၅၄၇၈ ရှိပါတယ်။ လာဖတ်သူ တသန်းပြည့်ဘို့ရာ ၅ ထောင်မလိုတော့ပါ။
ဘူး နဲ့ ဖူး ကိုရေးပြီး ဗူးရွက်တွေ ရောက်လာတယ်။ ဗူးရွက်မှာ အဖူးလေးတွေလည်း ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းလည်း ပါလာတယ်။ နောက်တယောက်ဆီက ကင်းပုံသီးရတယ်။ ကင်းဗုန်သီးလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။
ဘူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲကတော့ မှန်တယ်။ သတ်ပုံ ပြောတာပါ။ အခုတော့ ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင် မလိုချင်ဘူးတဲ့။ အဲတာက ဘူးနှစ်လုံးဆောင်။
နဝတ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကထုတ်ထားတဲ့ မြန်မာ အဘိဓာန်၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်တွေမှာ ဘူးပင်လို့သာ တွေ့ပါတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဗူးပင်လို့သာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းကနေ ပြုစုပြီး၊ စာပေဗိမာန်ကနေ ထုတ်ဝေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်တန်း (၁၉၅၃-၅၄) ဖတ်စာမှာ -
Man Man တို့မိသားစု၊ တို့တိုင်းရင်းသား၊ တို့ပြည်ထောင်စု၊ ဒို့မိသားစု၊ ဒို့တိုင်းရင်းသား၊ ဒို့ပြည်ထောင်စု။ ဒီစကားလုံးတွေမှာ "တို့"နဲ့ "ဒို့" ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာ။
- ကဏ္ဍတစ်ခုတည်း၌ ပါရှိနေကြလျှင် မဟုတ်။
- တစ်ဖန်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် မဟုတ်။
- တစ်သားတည်းဓာတ်ကူခြင်းဟုခေါ်သည် မဟုတ်။
- တစ်သားတည်းမဟုတ်သော မဟုတ်။
မင်္ဂလာပါ ဝန်ကြီးခင်ဗျာ။ အလုပ်တွေအရမ်းများလို့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဝန်ကြီးရဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ်ပါခင်ဗျ။
ဟုတ်။ ဝန်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ။ လူမှားရေးသလား စစ်ပါရန်။
အရင်က NCGUB မှာ ဝန်ကြီးတာဝန်ယူဖူးတယ်လို့ သိရလို့ပါခင်ဗျ။ ဆေးပညာကော မြန်မာစာအရေးအသား သတ်ပုံပါ လေ့လာခွင့်ရလို့ လူငယ်တွေကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
အော် ဟုတ်တယ်။ ကြာပြီပေါ့။
ကျွန်တော် University စတက်ကတည်းက သတင်းမှာ ပုံကိုခဏခဏ မြင်ဖူးပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ အနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်သင့်တာကိုလည်း လမ်းညွှန်စကားများ ပြောကြားပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၂၄ နှစ်။ ရဲအရာရှိပါခင်ဗျ။ အမည်က့့ လို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
• လုပ်ခဲ့ရတာတွေကတော့ ပလေကပ်ကိုင်ပြီး လမ်းတွေပေါ်မှာထိုင်ရတယ်။
• ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး အော်အော်ပေးရတယ်။
• ဟိုနေရာသည်နေရာမှာ မိန့်ခွန်းဆိုတာခြွေရတယ်။
• အခြေအနေထူးရင် အင်တာဗျူးပေးရတယ်။
• သူများလွှတ်တော်တို့ ကွန်ဂရက်တို့မှာ တက်ရတယ်။
မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်က NCGUB စင်ပြိုင်အစိုးရမှာ ၂၃-၇-၁၉၉၅ ကနေ ၁၄-၉-၂ဝ၁၂ နေ့ ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိ ဝန်ကြီးနာမည်နဲ့ တာဝန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ နီပေါ၊ ယူအက်စ်၊ စတဲ့ လွှတ်တော်တွေကို ရောက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အများဆုံးကတော့ နယူးဒေလီမြို့လယ်က ဂျန်တားမန်းတားလမ်းမပေါ်မှာ ခဏခဏဆန္ဒပြရတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ၁-၁၂-၂ဝ၁၂ နေ့ လက်ပတောင်းတောင်အရေးဆန္ဒပြပွဲ၊ နယူးဒေလီ
- ဘဝတက္ကသိုလ် တစ်တွဲ
သတ်ပုံအထောက်အထားအတွက် ပုံကိုယူသုံးပါရစေ။ ကျေးဇူး။
Photo from Wai Aye
စာအုပ်သစ်တွေပုံကို အားကျစရာဖြစ်အောင်တင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ သွားရည်ကျရမလား၊ မျက်ရည်ကျရမလား၊ မပြောတတ်ပါ။
တိုင်းပြည်အပြင်မှာသာနေရတာကြာတော့ စာအုပ်သစ်တွေနဲ့ပါ ရှင်ကွဲကွဲရတယ်။ ပိုးဟပ်စားခံထားရတဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတစုံနဲ့ ဘာသာရေးစာအုပ်နည်းနည်းလောက်သာ လက်ထဲမှာရှိတယ်။ မနေ့ကတင် အဖုံးအနှောင့် ကွာနေတဲ့စာအုပ်ကို လူနာကပ်တဲ့ပလာစတာနဲ့ ဆေးထည့်ပေးရသေးတယ်။
စာအုပ်သစ်တွေထဲမှာ၊ ခေတ်ဟောင်းက စာအုပ်ကောင်းတွေကို ပြန်ထုတ်ကြတာ တန်ဖိုးတော့ရှိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် သတ်ပုံသစ်တွေနဲ့ ရိုက်ကြတာတွေဆိုတော့ စာအုပ်လက်ဆောင်မပေးကြပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ။
တ ကို တစ်လုပ်တာအပါအဝင် သတ်ပုံသစ်တွေဖြစ်လာတာ ၁၉၈ဝ ကျော်ကနေစခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းကလို့ပြောတာ အပြည့်အစုံမမှန်ပါ။ သူကနေ တပြေးညီအောင်လုပ်ကြလို့သာ မိန့်မှာတယ်။ အဲတာ လက်ညှိုးတချောင်းသာရှိသေးတယ်။
အဲတာကို အဲဒီခေတ်က ပညာရှိတွေ ပညာရှင်တွေက ဖိန့်ဖိန့်တုံကြောက်ပြီးသကာလ တစ်တွေချည်းလုပ်လိုက်ကြတယ်။ အဲသည်အထိမှာ ဆိုးတာက လက်ညှိုး နှစ်ချောင်းသာရှိသေးတယ်။
(နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ တစ်မရေးရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးတာက ပိုဆိုးသွားစေတယ်။ လက်ညှိုးသုံးချောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ သတ်ပုံကျမ်းတွေ၊ အဘိဓာန်တွေကိုလည်း အကုန်ပြင်စေတယ်။ လက်ညှိုးလေးချောင်းမကဖြစ်သွားတယ်။
အာဏာရှင်နဲ့ အာဏာရှိသူဆိုရင် ပြားပြားဝပ်တဲ့အကျင့်နဲ့ ဝသီကစွဲနေကြတယ်။ အဲတာကြောင့် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နဝတ) လို့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးကနေ နာမည်ပေးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အခုထိ ပိပြားနေကြသေးတဲ့ ပညာရှင်တွေကို ခေါင်းထောင်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဦးနေဝင်း သြဇာသီးကြိုက်တယ်ပြောသံကြားတာနဲ့ ပြည်ကနေအပြန်မှာ တီအီးကားတစီးစာ ပို့ပေးတယ်တဲ့။ ဦးနေဝင်းအလွန်လား သြဇာခံတွေအလွန်လား။
ဆရာရေ မင်္ဂလာပါရှင့်။ တခုသိချင်တာလေးကိုဆရာကိုမေးပါရစေ။ ဆရာမအားလပ်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ အားကိုးလို့ မေးပါရစေ။ ကျွန်မမှာ သားလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ ၁ နှစ် ၄ လပါ။ သားသားကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက လမ်းညွန်ထားတဲ့ ကာကွယ် ဆေးတွေကို သူ့ရည်ညွှန်းလတွေတိုင်းထိုးပေးပါတယ် သားသားက မွေးကတည်းက ကျန်းမာပါတယ်။ ဒီနေ့ သူများကလေးတွေကအပြင်ဆေးရုံမှာ zika virus ကာကွယ်ဆေး ထိုးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါ ထိုးသင့် မထိုးသင့် သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာရဲ့ အားလပ်တဲ့တန်ဖိုးရှိအချိန်ထဲကနဲနဲလေးဖဲ့ပြီး ဖြေပေးပါရှင့်။ ဆရာ့အဖြေရခဲ့ရင် တခြားမေမေတွေကိုလဲ share ပါရစေ။ ကျေးဇူးတင် လေးစားလျက်။
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို ပဌမဆုံအကြိမ်အဖြစ် လူတွေကိုစမ်းသပ်ခြင်းကို ယူအက်စ်မှာခွင့်ပြုလို့ ၂ဝ-၆-၂ဝ၁၆ နေ့သတင်းမှာဖတ်ရတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာထိုးနေပြီတဲ့။ ဟုတ်ပါ့မလား။ အဲဒီစမ်းသပ်ထိုးခြင်းသတင်းထွက်တာ ၇၂ နာရီလောက်သာရှိသေးပါတယ်။
ဆေးတို့ ကာကွယ်ဆေးတို့ကို အသစ်ဖေါ်စပ်တိုင်း ဓါတ်ခွဲခန်း၊ တိရစ္ဆာန်၊ လူ၊ စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှသာ FDA တို့ WHO တို့ကနေခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်က ဒုက္ခပေးတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တာလည်း သတိထားပါ။ ကလေးတွေ မဟုတ်ပါ။
- Zika causes birth defects (ဇီကာ) ကနေ ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်စေတာ သေချာပြီ
- Zika ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ (ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန)
- Australia to step up Zika testing သြစတေးလျမှာ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးတော့မယ်
- Singapore reports first imported Zika case စင်္ကာပူမှာ ဇီကာဗိုပ်ရပ်စ်ပိုးစတင်တွေ့ရှိ
3 days ago - The researchers said that it's possible that people who get infected with dengue after Zika - or after immunization withaZika vaccine - would develop more severe dengue disease. But the dengue virus could also offeracure for Zika, according toastudy by the University of North Carolina.
အရမ်းအရေးကြီးလို့ပါ။ AIDS မိခင်က မွေးပြီးပြီးချင်းမှာ ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်လို့ရမလား။ အခုချက်ခြင်း အဖြေသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ကိုမေးတာတော့မဟုတ်ပါ။ မိတ်ဆွေတယောက်ကနေ ဖေါ်ဝပ်လုပ်လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။
HIV ရှိတဲ့မိခင်ရဲ့နို့ထဲမှာ ပိုးပါနေပါမယ်။ နို့တိုက်မယ် မတိုက်ဘူးဆိုတာ တဦးချင်းကိုကြည့်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ နို့မှုန့်နဲ့ အဆင်ပြေသူကို နို့မှုန့်သာတိုက်စေမယ်။ အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ မိခင်နို့ကိုတိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိခင်ရော ကလေးရော ATR ဆေးသောက်ရပါမယ်။ နို့ကို (၆) လအထိသာတိုက်ပါ။
How to live with HIV-positive person အတူနေမယ် မကူးစေရနဲ့ HIV and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နှင့် HIV ကိုလည်း ဖတ်ပါရန်။
Zau Man ဆရာ့ဆောင်းပါး စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်မှာ တွေ့တာဆရာ။
Zau Man စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်မှာ (တ) တွေသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ ဆရာ ဒလဘန်း ရဲ့ ဝါဆိုဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့ ဆောင်းပါးမှာလည်း (တ) တွေပဲသုံးထားတာတွေ့ရပြီ ဆရာ။
ဟုတ်၊ စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာ ဒလဘန်းကို ချီးကျူးပါတယ်။
သတ်ပုံအလွဲနဲ့တူတဲ့ နှုတ်ခမ်းကွဲကို ပြင်နေပြီ။ စကားမပီတာနဲ့တူတဲ့ အာခေါင်ကွဲကို ပြင်ရအုံးမယ်။
၁။ Geographical segregation ပထဝီအရပိုင်းခြားမှု၊
၂။ Racial segregation လူမျိုးစုအရပိုင်းခြားထားမှု၊
၃။ Religious segregation ဘာသာရေးအရပိုင်းခြားထားမှု၊
၄။ Sex segregation လိင်ကွဲပြားမှုအရပိုင်းခြားထားမှု။
• Racial segregation အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေ အမေရိကားမှာရော တောင်အာဖရိကမှာပါ ပပျောက်သွားပြီ။
• Berlin Wall ဘာလင်တံတိုင်းလဲပြိုကျသွားပြီ။
• Iron curtain ဥရောပကိုခွဲခြားထားခဲ့တဲ့ သံမဏိလိုက်ကာကြီးလဲမရှိတော့ပါ။
• မြန်မာပြည်က အရင်အစိုးရက လူမျိုးရေးနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို အာဏာဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေးအတွက်သာ အသုံးချနေတာဖြစ်တယ်။
နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတဲ့မိတ်ဆွေရင်း Kjell Magne Bondevik ကရေးထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ကံမကောင်းတာက မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဘာသာတရားကို နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးရတာ လွယ်လွန်းနေတာပါပဲတဲ့။
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကရေးခဲ့တဲ့စာ)
ပြိုကွဲနိုင်ခြေရှိတဲ့ အင်ပါယာ သို့မဟုတ် ပူတင်ကို ရုရှားက ဘယ်လိုနှစ်သက်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လို မချစ်တော့ပြီလဲစာအုပ်ကို ၂ဝ၁၃ ဇွန်လမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပေမဲ့ ကနေ့ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းထဲမှာ ပူလောင်ဆဲဖြစ်တဲ့ (ယူကရိန်း) ပြဿနာတွေနဲ့ဆက်ပြီး (ဗလာဒီမာ ပူတင်) ကို အာရုံစိုက်ရာကနေ ၂၉-၇-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ CNN တီဗွီကနေ စာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ Ben Judah (ဘင် ဂျူဒါ) ကို အင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်။
စာရေးသူဟာ ကရင်မလင်အတွင်းရေးကို ဆိုဗီယက်ယူနီယံအချိန်ကတည်းက နက်နက်နဲနဲ သိထားတဲ့ သတင်းစာဆရာ တယောက်ဖြစ်တယ်။ (ပူတင်) ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ရန်သူတွေ၊ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေ၊ ထိပ်တန်း စီးပွါးရေးသမားတွေကိုလဲ အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးမှ စာအုပ်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဒဖြန့်ချိရေးအရ ရုရှားဟာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ ပုံဖေါ်ထားပေမဲ့ ပူတင်အစိုးရကို ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်္ဘာလထဲမှာ လူထုအန်တုမှုပေါ်လာခဲ့တယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ စီးပွါးရေးတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတွေအားနည်းပြီး တည်ငြိမ်မှုယိုင်နဲ့လာတယ်လို့ စာရေးသူကထောက်ပြတယ်။ ပူတင်လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်၊ လူလတ်တန်းစား၊ အင်တာနက်၊ ဆိုရှယ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကမ္ဘာရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ သမတ ဆက်ခံမှုပြဿနာတွေပါဝင်တယ်။
(ပူတင်) ဟာ ၇-၁ဝ-၁၉၅၂ မှာမွေးခဲ့ပြီး၊ ရုရှားသမတအဖြစ် တတိယအကြိမ် ၇-၅-၂ဝ၁၂ ကတည်းက ဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝဝ နဲ့ ၂ဝဝ၈ တုံးကလဲ သမတလုပ်ခဲ့သေးတယ်။ ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ နဲ့ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၁၂ တွေမှာ ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီး ထောက်လှမ်းရေး KGB မှာ ၁၉၇၅ ကနေ ၁၉၉၁ အထိ ၁၆ နှစ်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့သေးတယ်။ (ပူတင်) ဟာ ဆိုဗီယက် အာဏာရှင် (စတာလင်) နဲ့မတူပါ။ သူ့ရဲ့ ကလကာနောက်ကွယ်ကဘဝဟာ သာမန်လူတယောက်လို လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ မနက်အိပ်ယာထရင် အရင်ဆုံး ရေကူးပြီး ဂျင်မ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ သူ့ဇနီး (လုဒ်မီလာ) နဲ့ ၂ဝ၁၃ မှာကွဲတယ်။ သမီး ၂ ယောက်ရှိတယ်။ သူဟာ အပျော့စားကွန်မြူနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အင်တာနက်ကို သုံးခဲပြီး၊ ကြိုးဖုန်းကိုသာ သုံးတာများတယ်။ နောက်ပြီး သူဟာ အရေးကြီးတဲ့အဆုံးအဖြတ်တွေကို သူတယောက်တည်း ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ကျော်မှာ ချုလေံရှိတယ်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၊ ဗဟိုကော်မတီ၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေမပါဘဲ လုပ်တတ်တယ်။
၁၉၉၉ တုံးကထုတ်ခဲ့တဲ့ ပြိုကွဲနိုင်ခြေရှိတဲ့ အင်ပါယာ သို့မဟုတ် အင်ပီရီရယ်ရုရှား၏သမိုင်းစာအုပ်ကိုတော့ (အလက်ဇန္ဒာ ချူဘာရော့ဖ်) ကရေးတာဖြစ်တယ်။ ဇာဘုရင်နန်းဆက်ပြတ်သွားတာ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲတာရဲ့ နောက်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ရေးတာဖြစ်တယ်။ ရုရှားအင်ပီရီရယ်ခေတ် (ပီတာဘုရင်ခေတ်ကနေ ဇာဘုရင်ပြုကျတဲ့ ၁၉၁၇ အထိ) ကို သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အင်ပီရီရယ်ကို တချို့နေရာမှာ နယ်ချဲ့ဝါဒလို့ဘာသာပြန်ပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ အင်ပါယာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားအကြောင်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေက စိတ်ဝင်စားမှုနည်းကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အနှစ် ၂ဝကြာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက ရုရှားဟာ အမြဲတန်း စစ်အစိုးရဘက်က လိုက်တာမို့လဲ ရုရှားကို ခင်မင်ရင်းစွဲမရှိကြပါ။ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဗီတိုပါဝါနဲ့အဆိုပယ်ချတာ၊ စစ်အစိုးရကို အနုမြူ (ရီယက်တာ) ရောင်းပေးတာ၊ ပညာတော်သင်လွှတ်တာတွေဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့လို့ သာမန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက မေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော် နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်များသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးတွေသွားပြီး စည်းရုံးရေးလုပ်တိုင်း ရုရှားအမတ်ဆိုလို့ တယောက်မှ မြန်မာအရေးကို ထောက်ခံမှုပေးတာ မရှိပါ။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အရာရှိတဦးကသာ သူက ရန်ကုန် ဆိုဗီယက်သံရုံးမှာ တာဝန်ကျခဲ့သူဖြစ်လို့ လူချင်းခင်မင်မှုရှိပါတယ်။ ဗမာစကား တလုံးစနှစ်လုံးစလဲ မမေ့သေးသူဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကမနှစ်သက်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ နိုင်ငံအကြောင်းတော့ သိဘို့လိုပါတယ်။ မနေ့တနေ့ကတင် အိန္ဒိယနဲ့ ရုရှား မြန်မာ့အရေးမှာ ဆင်တူတဲ့အချက်ရှိတာကို ရေးမိပါသေးတယ်။ အခုအစိုးရကလည်း မဖြစ်မနေ အရင်အစိုးရတွေ လုပ်တာတွေမှန်သမျှ အမွေဆက်ခံရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရှေးသမိုင်းမှာ အင်ပါယာတွေထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။ အချိန်တန်တော့ပြိုကွဲသွားတယ်။ ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ ကံဆိုးတာက ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲနိုင်ချေစကားနဲ့ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ကံသိပ်မဆိုးတာက ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဆိုသူ နေရာမရဖြစ်သွားတာပါ။ အခုတော့ ခွဲထွက်ရေးစကားဟာ အတော်ကြီး ခေတ်စားလာတယ်။ ခွဲစိတ်ရေးလည်း ပြောလာကြတယ်။ ကံဆိုးမလား၊ ကံကောင်းမလား မသိပါ။
Khin Gyaw ဆရာတို့က ကော်ဇောနီခင်းကြိုရမဲ့အဆင့်တွေပါ။ ကျန်တဲ့သာမန်လူတွေလို ဆက်ဆံခံရလို့ အားမလိုအားမရ ဖြစ်တာပါ ဆရာ။
• ၉ဝ ရလဒ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဗလာခင်းနှီး၊ ခြုံလွှမ်းပြီး ခရီးဆက်၊
• ပွက်ပွက်ဆူအပူကို လဖက်ရည်ကြမ်းသောက်သူ မမှုပါ၊
• ကန္တာရလမ်းမှာ၊ ထမ်းပိုးသူမပါဘဲသွား၊
• ကျား၊ ခြင်္သေ့၊ တောဘုရင်၊ သမင်သာစားလို့ရမယ်၊ ငါကား အုတ်ကြားမြက်၊
• အိပ်စက်နားစရာ၊ နှီးဖြာနဲ့ တာလပတ်သာပိုင်တယ်၊
• ယိုင်သော်လည်း မလဲ၊ လဲပေမယ့် ထလျှောက်၊ နောက်ဆုံးချိန်အထိ၊
• တွက်ဆစ်ကြည့် ကျိုးခဲ့တာ ခြေတချောင်းရှိ၊ ပဲ့ခဲ့တာ လက်ကောက်ဝတ်တဖက်တိတိ၊
• ၂၆ နှစ်ရှိ၊ လူနင်းသည့် ကမ္ဗလာခြုံ လုံပါပေ့ဗျာ။
- Nyunt Shwe ဆရာပြန်လာခဲ့ရင် ကလေးမြို့ကနေ မုံရွာကိုလာပြီးတွေ့လာမယ်ဆရာ။
- Aye Aye ဆရာပြန်လာရင် ကျမတို့မြို့ကိုလည်းအလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင့်။
- Sun Htoon Kyi ဝိုင်းမော်လာခဲ့ပါ။ လက်ဘက်ရည် ကြိုက်သလောက်ဧည့်ခံမည်။
- Nyunt Nyunt Aye ဆရာရေ လဖက်ရည်တင်မကဘူး ထမင်းပါကျွေးမယ်။ မမမြကိုတော့ လေယာဉ်ကွင်းကနေတန်းပြီး တိတ်ဆိတ်မှုငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းမှု တောရိပ်တောင်ရိပ် တရားရိပ်ရှိရာ ခေါ်ပြပေးနားမယ်။ မပင်ပန်း၊ မဆင်းရဲ၊ စိတ်မညစ်စေရပါ။ မပျော်တည အမြည်းပေ့ါ။ ပျော်နေချင်သလောက်ပေါ့။
ဒေလီ ယမုန်ဆေးခန်းလေးမှာ တပည့်ဆရာမလေးတယောက်ရှိတယ်။ ဆရာက အေးချမ်းသာယာတာကိုကြိုက်တော့ မတူပီက ကျမတို့ရွာမှာ လာနေပါဆရာ။ ဆရာ့ကို ထမင်းကျွေးထားမယ်တဲ့။ ကျမက ထမင်းတော့မချက်တတ်ဘူးတဲ့။ ဆရာကြိုက်သလောက်နေပါတဲ့။ ကျမကတော့ အကိုတွေရှိတဲ့ မလေးရှားကိုသွားရမယ်တဲ့။
ကျွန်တော့် Black list အဖြူစာရင်းမှာ နာမည်သွင်းခံရပြီပို့စ်အောက်မှာ မန္တလေးဆေးကျောင်းမှာ စာအတူသင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကွန်မင့်ပေးကြပါတယ်။
သူငယ်ချင်း (က) = မြန်မာပြည်သူတွေက ကျီးလန့် စာစားဘဝနဲ့ မတရားလူလိမ်လူညာ လူယုတ်မာတွေကြား အနေကြာလာတော့ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်လာရင် သတိအနေအထားလေးပိုပိုသာသာ ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားပါနော်။
Tint Swe ဟုတ်မယ်သူငယ်ချင်း။ သဘောတူတယ်။ ညီအရင်းကလည်း အဲလိုပဲ သတိပေးပါတယ်။
သူငယ်ချင်း (က) = ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းမိလို့ နစ်နာသွားတာတွေရှိတတ်လို့ပါ။
သူငယ်ချင်း (ခ) = ကျမတို့တော့ သတိနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကတော့ သေရာပါအကျင့်ဖြစ်သွားပြီ။
သူငယ်ချင်း (ဂ) = ထောက်လှမ်းရေးကိုတော့ ဂရုစိုက်ရမယ်။ ကောက်ရိုးပုံထဲကအပ်တောင် ရအောင်ရှာနိုင်တယ်လို့ ကြွားလေ့ရှိကြတယ်။ ဖိနောင့်အပ်စူးလို့ရယ်၊ ပါလေရာငပိချက်တွေ အာချောင်တာရယ်၊ သူမတူအောင် စစ်တာ မေးတာတွေကြ ထဲ့မပြောကြဘူး။ (ထောက်လှမ်းရေးက ငယ်သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ ပြောခဲ့တာ။)
Tint Swe သူငယ်ချင်းတွေရေ - မင်းတို့တတွေ ငါလာရင် လက်ဖက်ရည်တောင်ခေါ်တိုက်ရဲကြပါ့မလား။
လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည် အလှတရားကို ရုပ်ဆိုးစေသည်။
Black list အဖြူစာရင်းမှာ နာမည်သွင်းခံရပြီကိုတင်တော့ ပဌမဆုံးတခါကလည်း ဝမ်းသာကြောင်းပြောကြပါတယ်။ အဖြူစာရင်းကလည်း ထပ်ထွက်တာပါ။ အခုထပ်တင်တော့လည်း ပြောလာကြတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၉၉ဝ အမတ်အုပ်စုက ၂ဝ၁၂ သြဂုတ်လထွက်စာရင်းကတည်းက ပါထားပြီးသားပါ။ အတော်များများ အရင်ထွက်ခဲ့တာကို မေ့နေကြတယ်။ အရင်စာရင်း (ပီဒီအက်ဖ်) ဖိုင်ကိုပို့ပေးရတာ တနာရီအတွင်း ၂ ယောက်ရှိပြီ။
နောက် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်လွှာနဲ့ ခံဝန်ချက်လက်မှတ်ထိုးရတာ။ အဲတာအတွက် စိတ်မကောင်းတာ၊ ဒေါသထွက်ကြတာတွေအတွက် ဆရာစိန်ဝင်းမိသားစုကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းလင်ချက်ကလေး ရေးပါရစေ။ ကျွန်တော်သိသလောက်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြည်ပထွက်နေသူတိုင်း ပြည်တွင်းအလည်ပြန်ချင်ရင် တရားဝင် ပတ်စ်ပို့ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားခွင့် ဒေါကူးမင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရီအင်ထရီပါမစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးတွေမှာ ဗီဇာလျှောက်နိုင်ကြပါတယ်။ ဗီဇာလျှောက်လွှာရယ်အပြင် သံအမတ်ကြီးဆီကို အသနားခံစာသပ်သပ်ရေးရတယ်။ ဒါ့တွေအပြင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူး ခံဝန်ချက်ကိုပါ လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ ဗီဇာအမျိုးအစားကလည်း ဆိုရှယ်ဗီဇာသာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုက ၂ဝ၁၂ နောက်ပိုင်းမှာ အဲလိုလျှောက်ခွင့် ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ စောစောက အဲဒီလူတွေလာရင် အမျိုးအိမ်မှာတည်းခွင့်မရပါ။
(ပီအာရ်) ဆိုတာ အရင်အစိုးရက လမ်းတော့ဖွင့်ပြီ၊ ငွေပေးရတာတွေက မတန်တဆဖြစ်သေးတယ်။
အသနားခံစာနဲ့ ခံဝန်ချက်အတွက် အရင်အစိုးရကိုသာလက်ညှိုးထိုးလို့မပြီးသေးပါ။ စစ်အစိုးရသာမကပါ။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်ကတည်းကရှိပုံရတယ်။ အတိအကျမပြောတတ်သေးပါ။ သံရုံးတွေက တည်ဆဲညွှန်ကြားချက်တွေကို လျှော့လို့ ပိုလို့မရကြပါ။ အဲတာကတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ပြည်ပရောက်နေသူတွေထဲက အများစုအတွက်သာဖြစ်မယ်။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနကနေ (အခုထိ) ဝင်ခွင့်မပေးချင်သူစာရင်းက သပ်သပ်ရှိမယ်ထင်ရတယ်။
ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ ပြင်စရာဆိုတာ အဲဒီအချက်တွေလည်းပါတယ်။ ပြစ်တင်နေတာထက် ပြင်စရာပါလို့ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအထက်က ကာချုပ်ကိုသာ သိစေအောင်နဲ့ ပြုပြင်လာအောင် လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်/ကျွန်တော်မ မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ခြင်းသည် မိသားစုဆွေးမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများအား သွားရောက် တွေ့ဆုံခြင်းသာဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်သူများနှင့်သော်လည်းကောင်း ပါဝင်ပတ်သက်၊ ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း အောက်တွင် ခံဝန်ကတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။
ကျွန်တော် မဟုတ်ပါ။ သိအောင်သာရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်လို့ပြန်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော့်အဖြစ်က (မင်း) စာလုံးတွေနဲ့ဆက်စပ်တယ်။
• ကျွန်တော်က အဖေ့ရွာ မင်းရွာမှာမွေးတယ်။
• အမေ့ရွာက မင်းတိုင်ပင်၊ အမေ့ဘကြီး ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းလည်း မင်းတိုင်ပင်မှာမွေးပါတယ်။
• ကျွန်တော်ကတော့ မင်းဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ မင်းပြေး။
• မင်းချင်းခေါ်ရမယ့် ထောက်လှမ်းရေးဘေးက ပြေးခဲ့ရတယ်။
• မင်းတိုင်းကျေလုပ်သူတွေနဲ့ မင်းမြှောင်စိုးကပ်တွေကိုတော့ အဝေးကမြင်ရတယ်။
• ဘယ်တော့မှလည်း မင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါ။ မင်းခမ်းမင်းနား မတက်ဖူးပါ။ မင်းလောင်းမင်းလျာရွေးတာ မဲမပေးရပါ။
• မင်းခမ်းမင်းနားတွေကျင်းပရာ နေပြည်တော်ကို မရောက်ဘူးပါ။
• မင်းပြစ်စိုးဒဏ်မခံနိုင်လို့ တိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးရပေမယ့် ရွာ့ပြင်ထုတ်ခံရသူမဟုတ်ပါ။
• အခုတော့ မင်းတုပ်တံခါး ဖွင့်ထားပုံရပါပြီ။
ဆရာ ဒီဆပ်ပြာက ဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆရာ။ ဝက်ခြံအတွက်ဘဲလားဆရာ။ ပြောပြပေးပါလားဆရာ။
မေးတဲ့သူ အသက်-ကျား-မ-ရာသီ-အိမ်ထောင်ရေး-ကိုယ်ဝန်-ကလေး မသိပါ။
ကြော်ငြာကုန်သဘောဖြစ်တယ်။ ထိရောက်မှု မသိပါ။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု မရှိလောက်ပါ။ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံတွေက မတူကြပါ။
ရေးထားပြီး ဝက်ခြံစာများ -
1. Acne Antibiotics ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ
2. Acne during pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဝက်ခြံ
3. Acne Laser treatment ဝက်ခြံကို လေဆာ နဲ့ ကုသခြင်း
4. Acne question ဝက်ခြံမေးခွန်း
5. Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ်
6. Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံ
7. Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ
8. Antibiotics for Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ
9. Male Hormonal Acne ယောက်ျားဟော်မုန်းဝက်ခြံ
10. Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ
Hair Loss (1) ဆံပင်ကြွတ်ခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss.html
Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-loss-in-women-treatments.html
မြန်မာလူမျိုးတွေစားတာကို အမေရိကားမှာ စိုက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ခြံမှာစိုက်ထားပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ပို့စ်တင်တယ်။ Smile ကွန်မင့်တခုရေးလိုက်တာ အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပေးတယ်။
ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ငရုပ်သီးနဲ့ (လေဒီးစ်ဖင်းဂါး)။
နောက်ဆုံးစားစရာကိုမှ အင်္ဂလိပ်လိုရေးရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အစိုးရထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်မှာ (ရုံးပတီသီး) တဲ့။ အွန်လိုင်းသတ်ပုံကျမ်းက (ရုံးမတီသီး) တဲ့။ ကျွန်တော်တို့အရပ်မှာ (ရုံးပလေသီး) လို့သာခေါ်တယ်။ ဒေလီမှာ (လေဒီးစ်ဖင်းဂါး) ဆိုရင် လူတိုင်းသိတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ တမျိုးတဘာသာ (အိုကရာ) တဲ့။
ကြုံကြိုက်လို့ ပြောရအုံးမယ်။ ဒေလီတုံးကဆေးခန်းလေးမှာ ဆရာမတွေကိုစာသင်ပေးရတော့ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ဆိုတာ အရည်အချင်း (၃) ရပ်ရှိအပ်တယ်လို့ သင်ပေးပါတယ်။
၁။ (အီးဂဲလ်စ် အိုင်း) သိန်းငှက်တို့မျက်စိလို စူးရှပြီး မြင်နိုင်စွမ်း ကောင်းရတယ်။
၂။ (လိုင်းယွန်းစ် ဟဒ်) ခြင်္သေ့လို သားကောင်ငယ်ပါစေ စိုက်ထုတ်တဲ့လုံ့လကို မပေါ့ရ။
၃။ (လေးဒီးစ် ဟင်း) မိန်းကလေးလက်တွေလို ကိုင်တာတွယ်တာ ညင်သာရမယ်။
နောက်ရက်တွေမှာ မှတ်မိကြလား ပြန်မေးတော့ ဆရာမ ၃-၄ ယောက်က နံပတ် (၃) ကို တထပ်တည်း ဖြေကြတယ်။ (လေးဒီးစ် ဖင်းဂါး) တဲ့။
Thanks to Ma Hnin and Aung Kyaw Moe
Ah Htein မြန်မာစာ ဖတ်စာစာအုပ် ပထမတန်းရဲ့ ဖတ်စာ ၅ မှာတော့ စံပယ် လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဆရာ့့
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်တန်း (၁၉၅၄-၅၅) လောက်ကစာအုပ်ကို သိမ်းမထားခဲ့မိတာ နာတယ်ဗျာ။
အခုက သက်သေခံပစ္စည်း အစားထိုးထားတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ တရားလိုရှုံးသွားပြီပေါ့။ ထောင်ကျလည်း တန်တယ် ထင်လိုက်မယ်။ ဂ ဂဏန်းကောင် လက်မထောင့့်
နောက်ထပ် တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ လက်ရှိထုတ်ဝေထားတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်ကသာ အမှန်လို့ တယောက်ပြီးတယောက် ကူးတင်နေကြတယ်။ မှားလေ့ရှိသော မြန်မာစကားလုံးများ (၁) မှာ (ဇိုးကနဲ ဇက်ကနဲ) ကို (ဆိုးကနဲ ဆတ်ကနဲ) လို့ ရေးတာက အမှန်လို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
(ဇိုးကနဲ ဇက်ကနဲ) ကို၌က အရင်ကလည်း ဘယ်သူမှမသုံးပါ။ (ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲ) လို့ (တ) သတ်နဲ့သာသုံးပါတယ်။
(ဆတ်ကနဲ) လို့ရေးတာကတော့ အဓိပ္ပါယ်မမှားပါ။ (ဆိုးကနဲ) က အဓိပ္ပါယ် တက်တက်စင်လွဲပါတယ်။
(ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲ) ဟာ လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်တာကို ထိထိမိမိဖေါ်ပြရာမှာသုံးပါတယ်။ (ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်) လို့လည်း သုံးပါတယ်။ (ဇွတ်၊ ဇွတ်ဒရွတ်) လို့သုံးသလိုဖြစ်တယ်။ ဗန်းစကားသဘောနဲ့ (ဇွတ်ကြီးပဲ)၊ (ဇွတ်သမား) လို့ ကနေ့အထိသုံးတယ် ထင်ပါတယ်။ (ဆွတ်သမား) လို့သာရေးခိုင်းရင် ပန်းခူးတဲ့သူလို့ပဲထင်မယ်။
အဆိုတော် မေဆွိဆိုတဲ့ ဇွတ်ချစ်မယ်သီချင်းရှိတယ်။ တွယ်တာ ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ သီချင်းရေးဆရာ သုခမိန်လှိုင်က ဆွတ်ချစ်မယ်လို့ မရေးပါ။
ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားစီရင်တော်မူသည်
စာမျက်နှာ ၆ = တပါးသောနည်းတို့ကို အားထုတ်၍ ကျေနပ်လောက်အောင် မပေါက်ရောက်နိုင်သေးသော်လည်း စိတ်အားငယ်၍ မနေလင့်။
စာမျက်နှာ ၂၄ = တနည်းကား ကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လောကဓံတရားပေတည်း။
စာမျက်နှာ ၃၅ = ဤအမတ်ကြီးသည် ယနေ့ပင် ငါ၏ထံ၌ ဂါထာတပုဒ်ကိုကြားနာပြီးလျှင် ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မည်။
စာမျက်နှာ ၁၂ဝ = ဤနည်းသည်ကား တမျိုးတမည်နှလုံးသွင်းနည်းမဟုတ်ပေ။
- တစ်ပါးသောနည်းတို့ကို မဟုတ်။
- တစ်နည်းကား မဟုတ်။
- ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုကြားနာပြီးလျှင် မဟုတ်။
- တစ်မျိုးတစ်မည်နှလုံးသွင်းနည်းမဟုတ်ပေ မဟုတ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေ၊ ဆရာတော်တွေရေးသားစီရင်တဲ့တရားစာအုပ်တွေကို (တစ်ရားတော်) နဲ့ (တစ်ရားစာအုပ်) တွေမဖြစ်သင့်ဟု ယူဆပါကြောင်း သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျား။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ပေါင်းရှင်းချိန်
တယောက်က ဆရာ့့ ကျနော်ပေါက်တူးတလက်နဲ့ စောင့်နေပြီတဲ့။
- ဟုတ့့် ကျွန်တော်က ပေါင်းမြက်သင်မဲ့သူ လူစုနေတာ၊
- လာဗျာ့့ ပေါက်တူး၊ ပေါက်ပြား၊ ငန်းပြား၊ တူရွင်း၊
- ဘာမှမပါလည်း ခြေထောက်နဲ့နင်း၊
- ဖနာင့်နဲ့ပေါက်၊ တယောက်မှာ ဖနောင့်မဲ ၂ မဲစီပိုင်တာ၊
- မြားပစ်ရမယ့်နေရာ (အာချီလီစ် ဟီးလ်) ဟာ နိုဝင်္ဘာ၊
- နေပြည်တော်ဟာ ထရွိုင်မြို့ပါ။
Kyaw Soe Win တစ် မသုံး တ သုံးတဲ့စာကြောင်းပါလို့ ဆရာ့အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အကိုးအကား အထောက်အထားရမယ် ထင်ပါတယ်ဆရာ။
၁၉၅၆ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းက ထုတ်ဝေပြီး အထက်တန်းကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့နီတိစာအုပ်မှာ (တ) တွေကို (တစ်) မလုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူ့နီတိနဲ့သာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်လေးချက်၊ တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးနဲ့သာ ကြီးပြင်းရသူများအတွက် အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်အံ့။
ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားစီရင်တော်မူသည့် ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း ပထမတွဲ။ စာမျက်နှာ (၇)
အချို့အနည်းငယ်သောအရာ၌ ရှေးရိုးသတ်ပုံသို့မလိုက်ဘဲ အသံမှန်သို့လိုက်၍ရေးအံ့။ ပုံကား - မရှိပါပဲလျက်၊ သို့သော်လည်း၊ လျစ်လျူ၊ ဤသို့စသောအရာတို့၌မရှိပါဘဲလျက်၊ သို့သော်လဲ၊ လစ်လျူ - ဤသို့စသဖြင့် ရေးအံ့။
ကျမ်းဂန်သုံးစကားသို့ မလိုက်မူ၍ ထင်ရှားသိလွယ်စေရန် အရပ်သုံးစကားသို့လိုက်၍ရေးအံ့။ ဤသို့သော ရေးသားချက်များသည် အထူးအားဖြင့် အခဏ်း (၅) ၌ များစွာပါဝင်လတံ့။
မြတ်စွာဘုရားသည် တရားတော်ကို ထိုစဉ်အခါက ကျမ်းသုံးစကားဖြစ်သော သက္ကတဘာသာဖြင့် မဟောခဲ့ချေ။ တောရွာသူ ကလေးများအထိ အများပင်နားလည်၍ သုံးစွဲပြောဆိုနေသော မာဂဓဘာသာဖြင့်သာ ဟော်တော်မူခဲ့ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤအရပ်သုံးစကားကိုလဲ လေးပြုသင့်သည်သာတည်း။ ဆန်းသည် သေးနုပ်သည်ဟူ၍ကား မအောက်မေ့သင့်ပေ။
နေမျိုး နွယ် = ဆရာ အထောက်ထားတွေက ခိုင်လုံတယ်၊ စုံလဲစုံတယ်။ ရှေးခေတ် ပိုက်ဆံ တကျပ်၊ တရာကျပ်၊ ပိဋကတ်တော်မြန်မာပြန်၊ မိုးကုတ်စာအုပ် အတော်စုံတယ်။
ဟုတ့့် ခုထိတော့ ကျွဲလို့ပဲဖတ်ကြတုန်းပဲဗျ။ တပုဒ်ရေး တမဲ၊ ဇွဲမလျှော့ပါ။
ယမုန်နာဆေးခန်းသို့နှုတ်ဆက်ခြင်းစာလေးကို (ယူအက်စ်) ကိုထွက်မလာခင် (၅) ရက်အလို ၁၃-၉-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက် အခမဲ့ (၁၂) နှစ်ကြာဆေးခန်းဖွင့်ပြီး တတ်နိုင်တာ ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာက (၂၄) နှစ်ကြာတော့ ဒေသခံအသိမိတ်ဆွေတွေလည်း များပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာစာမဖတ်တတ်ကြလို့ နှုတ်ဆက်စကားကို အင်္ဂလိပ်လိုပါရေးခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က My two cents လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပြုတဲ့အမှု သေးငယ်နည်းပါးတာကိုပြောချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်က နှိမ်ချပြီး (၂) ဆင့်လို့ပြောတယ်။ (၂) ပဲနိ ကနေ ဆက်သုံးလာတာပါ။ ဒီအတွက် တင်စားချက် မြန်မာအသုံးအစစ်ကို လောကသာရပျို့မှာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာစာအရေးအသားမှာ (တ) နေရာမှာ (တစ်) လုပ်စေတာဟာ ၁၉၈၁ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဦးနေဝင်းလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ လုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်နဲ့တော့ (နဝတ) အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ပါတယ်။
လောကသာရပျို့မူရင်းကိုဖတ်ရင် (တစက်) ကို (တစ်စက်) လို့ မရေးတာကို တွေ့ရပါမယ်။
စေ့မြေ့သိပ်သည်း၊ ရွေ့ရွေ့ဆည်းလော့၊ စရည်းအိုးခွက်၊ ကြီးစွာလျက်လျှင်၊ စဉ်ဆက်ကျများ၊ ပြည့်သောလားသို့၊ ပျား၏နည်းထုံး မှတ်ကျင့်သုံး၍၊ ခြပုန်းတောင်ပို့ ဖို့သည့်ခြင်းရာ၊ လူလိမ္မာတို့၊ ဥစ္စာဆည်းထွေ၊ တတ်လှစေလော့၊ ကြွက်သေတခု၊ အရင်းပြု၍၊ ကြွယ်မှုတတ်ဆုံး၊ သေဋ္ဌေးထုံးကို၊ နှလုံးမူလျက်၊ ကြံစည်နက်ကို။ သူ့ထက်လွန်ကဲ ကြိုးစေမင်း။
ကျွန်တော် မြန်မာစာသတ်ပုံအရေးအတွက် ရေးပေါင်းများနေပါပြီ။ တပုဒ်ရေး တမဲ၊ ဇွဲမလျှော့ပါ။
ထူးခြားချက်တရပ်မှာ ယင်းဂျာနယ်အချို့တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်က နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရောင်အဆင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့က ကလောင်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်၎င်း၊ ပင်ကိုယ်နာမည်ရင်းဖြင့်၎င်း ပါဝင်ရေးသားလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ရေးသားကြသူများတွင် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ စောစံဖိုးသင်လည်းပါရှိလေသည်။
အိုးဝေဂျာနယ်တွင် စောစံဖိုးသင်ပြောသော ပုံပြင်ဟူ၍ အခန်းတခန်းဖွင့်ပြီး စောစံဖိုးသင် ရေးလိုပြောလိုသမျှကို ရေးသား ဖေါ်ပြရန် အယ်ဒီတာချုပ်က စီစဉ်ခဲ့လေသည်။ အိုးဝေဂျာနယ်တွင် အယ်ဒီတာတဦးဖြစ်နေသော စာရေးသူက ရိုးသားသော ကရင်အမျိုးသားတဦးအနေဖြင့် တိုတိုပြတ်ပြတ်ရေးသားသော စောစံဖိုးသင်၏ ဆောင်းပါးများကို့့
- ထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာ မဟုတ်ပါ။
- အခန်းတစ်ခန်းဖွင့်ပြီး မဟုတ်ပါ။
- ကရင်အမျိုးသားတစ်ဦးအနေဖြင့် မဟုတ်ပါ။
မုံရွာအညာကမို့ ကြိုဆိုရတယ်။ နယ်သူနယ်သားမို့ အာမနာပါးမနာ ပြောပါရစေ။ ခေါင်းလောင်းသံတညံညံ၊ စာအတူ အံခဲ့သူသဘောနဲ့ပါ။
(တက်ဘလွိုက်) တော့ မဖြစ်စေနဲ့။ မီဒီယာဆိုတာ မဟုတ်မဟပ်တွေလည်း ထည့်ရတာတော့သိပါရဲ့။ တချို့မီဒီယာတွေက အဲတာမျိုးပဲ စင်တင်ပေးကြတယ်။ ရေဒီယိုတွေ၊ တီဗွီတွေလည်းပါတယ်။
ပြည်တွင်းတော့ သိပ်မသိပါ။ ပြည်ပက ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတွေ၊ အငြိမ်းစားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရာသက်ပန်ဆရာကြီးတွေတော့ အကုန်သိတယ်။ အပြောကတော့ ချောနေတာမျိုးက အသံဖိုင်မှာ သိပ်အသုံးကျတော့ နားထောင်သူတွေ လက်ခုပ်ရတယ်။ မိုင် ၃-၄ ထောင်အထိလှမ်းလှမ်းခေါ်ကြတယ်။ အရေးအသားမိုက်ရင် ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာ ဘဝင်ခိုက်တော့ လိုက်တွေများတယ်။ မသိတော့ ဟီးရိုးတောင်မက၊ အာဇာနည်လို့အထင်ခံရတယ်။
မယုံရင် ဘယ်နိုင်ရောက် ဘယ်သူ့ကို မေးကြည့်ပါဆိုတဲ့ ကွန်မင့်ပေးသူမျိုးကလည်း လာသေးတယ်။ မူကြိုအဆင့်မျိုးပေါ့။ ဘာပြောနေနေ ခေတ်တိုင်းမှာ တက်ဘလွိုက်ဆိုတာ သည်းခြေကြိုက်ပါ။ မုံရွာဂေဇက် သွက်လက်ပါစေသတည်း။
ကမ်းစပ်မှာညောင်ပင် မြစ်ရေပြင်ဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံ
ကမ်းမဝေးပေါင် လက်ပတောင်းတောင် ဝမ်ပေါင်ကိုအံတုနေရရှာ
သလွန်ညောင်စောင်းမှာ ခေါင်းအုန်းနဲ့ဖိခံနေရတာ ဧရာဝတီပါ
နောင်တော်သာလွန်ရင် သြရသပုတ္တဖြစ်မယ့်ချင်းတွင်းမှာ မျက်ရည်သွန်းဖြိုးလာ
သြရသပုတ္တ = ရင်၌ဖြစ်သောသား
ပီတုဃာတက = အဖကိုသတ်သော (သူ)
Photo from Ye Khaing
စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၆ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
အကြင်မိန်းကလေးသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သူမသည် နုနယ်သည်။ ငယ်လည်း ငယ်မျစ်သည်။ ချစ်လည်း ချစ်စရာကောင်းသည်။
‘ရွှေဝါပိတ်ရှင်း၊ ထည်ချင်းစံပယ်၊ နံ့ကြွယ်လှိုင်ကြူ၊ မဉ္စူမျက်မည်း၊ ဖော်ထပ်စည်းနှင့်၊ မရည်းမထင်၊ ဖြုတ်ချည်းမြင်က၊ နတ်ပင်ရိုးမှား၊ ဝိုးဝါးတွေးချွတ်၊ စိတ်လုံးညွှတ်’ ဖွယ်လည်းကောင်းသည်။
‘ထုံးမြရွက်နှင့်၊ လိုက်ဖက်တင့်မှတ်၊ ကိုယ်ဝတ်တော်မှာ၊ မလ္လာရနံ့၊ မွှေးပျံ့ကြိုင်ရွှင်း၊ ပယင်းရွှေရည်၊ ပွတ်လဲ့ကြည်သို့၊ မြရည်ကြောစိမ်း၊ လဲ့လဲ့ရှိန်းမျှ၊ ခပ်သိမ်းကလျာ၊ ရှုဘွယ်သာလျှင်၊ သိင်္ဂါလျှံတောက်၊ လက်ကောက်လက်ကြပ်၊ ရည်လျှပ်ဆံကျင်၊ မျှမဆင်လည်း၊ တိုင်းပင်တင့်မှတ်’ ရသော လှခေါင်ထွတ်တဦးလည်းဖြစ်သည်။့့
Nyo Htet Nyo Linnay Thit ခင်ဗျား ကြိုက်ချင်မှတော့ ကြိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်ခင်မင် ဆိုတာ မြန်မာစာ ပါမောက္ခကြီး။ ဒါ့အပြင် စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက်ပါ။ သူက လက်ရှိ အစိုးရ ထုတ်ဝေထားတဲ့ မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း အရ တစ် လို့ ရေးတာပါ။ တ တွေကို တစ် လို့ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ပြောင်းခဲ့တာ သူ ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။ သူ မှီတဲ့ ခေတ်ပဲဟာ။ မောင်ခင်မင့် အသက် အခု အနည်းလေး ခြောက်ဆယ်ကျော်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အစိုးရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေးထုံးအတိုင်း တညီတည်း စာရေးဆရာ တွေ ရေးကြရပါတယ်။ တစ် ကို တ လို့ ပြန်ပြင်ချင်ရင် အခြားနည်းမရှိ။ အစိုးရက ပြန်အမိန့်ုထုတ်ပြီး (ဗိုလ်နေဝင်းနည်းအတိုင်း) ပြင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်တန်း ကတည်းက ကလေးတွေကို တစ် လို့ မသင်ဘဲ တ လို့ ပြန်သင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး တစ်ပြည်လုံး တပြေးညီ တ လို့ ပုံနှိပ်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့အပြင် အခြားနည်း မရှိပါ။ ကလေးတွေကို 'တစ်' လို့ သင်နေသရွေ့ အဲဒီကလေးတွေ တစ် လို့ပဲ ရေးကြမှာပါ။
Tint Swe ကျွန်တော့်စာအုပ်ကို ပုဂံတိုက်ကထုတ်တာ (၂) ပတ်သာရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မူအတိုင်း တစ်တွေမပါပဲ ထုတ်ပေးပါတယ်။ အခုထိတော့ တရားမစွဲသေးပါ။
Nyo Htet Nyo အမှန်တော့ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ကိုယ့်စာပေအတွက် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တညီတည်း ပြန်ပြင်သင့်ပြီ။ ပထမဆုံး သူငယ်တန်း ကလေး တွေကို သင်တဲ့နေရာမှာ မုချ ပြင်ရပါမယ်။ တပြိုင်နက်တည်း ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေကိုပါ ပြင်ရပါမယ်။ ပြင်ရင်လဲ အမိန့်ထုတ် ပြင်ဖို့ကလွဲပြီး အခြားနည်း မရှိပါ။ ဒီနေ့လုပ်ရင် နောက် သုံးနှစ်အတွင်း ဒီပြဿနာ ပြီးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ အကူအညီ မပါဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။
Tint Swe မြန်မာစာသမိုင်းမှာ ဘုရင်တွေ၊ အစိုးရတွေကနေ သတ်ပုံကို အမိန့်နဲ့ခိုင်းတာ မရှိပါ။ ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် ၁၉၈၁ ဇူလိုင်လနဲ့ သြဂုတ်လ မြန်မာစာအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာ တပြေးညီအောင်လုပ်ကြလို့သာ လမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် (နဝတ) မဟုတ်၊ (နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပဌမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ်ပုံသာမက အသုံး ဥပမာ ယိုးဒယား မဟုတ်ရင် ထုတ်ဝေခွင့် မပေးပါ။ စာလုံးရေအလိုက် ဒဏ်ငွေဆောင်ရပါတယ်။
မျက်စိအောက်မှာတင် အရင်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းကစပြီး သတ်ပုံပြင်လာကြတဲ့ မီဒီယာတွေ တွေ့လာနေပါတယ်။ လွက်သွက်ခါမှားတာတွေလည်း များပါသေးတယ်။
မြန်မာစာကိုတကယ်တန်း တန်ဖိုးထားသူတွေနေသာ မှန်ကန်၊ တိုးတက်၊ စည်ပင်အောင်၊ ခေတ်နဲ့လျှော်ညီအောင် လုပ်ကြရပါမယ်။ အမိန့်အာဏာနောက်သာလိုက်တဲ့အကျင့် နည်းလာ၊ ပြင်လာမှသာ ရလာစရာရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက တစ်တရားခံမဟုတ်ပါ။ အကျင့်ဟောင်းကသာ။ ဘဲအုပ်ကြားမှာ ဗေဒါတွေပင်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် နောက်ထပ်လည်း စာအုပ်တွေထုတ်ပါမယ်။ သတ်ပုံမှန်တဲ့စာအုပ်တိုက်ကနေသာ ထုတ်ပါတယ်။ တစ်တွေမဟုတ်လို့ မဝယ်ကြလည်း ဝမ်းမနည်းပါ။
စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၇ နှစ်စပ်လျဉ်း၍
ဂျူလိုင် ၂၆။ ယနေ့နံနက် နေမကောင်း။ တနေ့လုံး ဖဲကစားသည်။ အကုန်ရှုံးသည်။ ညစာကို အိမ်တွင်စားသည်။ အဖျားတက်လာပြီး၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှသော ဖဲဝါသနာကို ဖြတ်ရန် ကြိုးစားကြည့်သည်။ သို့ရာတွင် တည်ငြိမ်စွာ မတွေးနိုင်။ အဖျားတက်သဖြင့် ကယောင်ချောက်ချား စဉ်းစားခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်။
ဂျူလိုင် ၂၇။ ပြင်သစ်မိတ်ဆွေတဦးထံမှ ငွေ ၂ဝဝ ချေး၍ ကစားပြန်သည်။ ရှုံးပြန်သည်။ မိတ်ဆွေများထံစာရေးသည်။ နောက်ထပ်မကစားတော့ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ တည်ငြိမ်စွာ စဉ်းစားနိုင်စပြုလာပြီ။
ဂျူလိုင် ၂၈။ အိပ်ယာမှ ကြည်လင်စွာနိုးလာသည်။ ယနေ့ ဆရာဝန်ထံသွားပြသည်။ တပတ်လောက်ကုရမည်ဟု ပြောသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်အဖို့ကား ဆရာဝန်သည် အချည်းအနှီးသာဖြစ်သည်။ (တော်လ်စထွိုင်း၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများမှ။)
တစ်နေ့လုံး ဖဲကစားသည် မဟုတ်။
၃-၄-၄၂ ရက်နေ့မှာ ဂျပန် မန္တလေးကိုလာပြီး ဗုံးကြဲတယ်။ အာရှအရှေ့ဖျားစစ်ပွဲမှာ အကြီးဆုံး တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခြင်းတရပ်ဖြစ်တယ်။ လူ ၂ဝဝဝ နဲ့ ၃ဝဝဝ ကြား သေကြေပျက်စီးတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိတယ်။
အထက်ပါပုံမှာ ဗုံးကျပြီး မြို့လယ်တနေရာကို တွေ့မြင်ရပုံဖြစ်တယ်။
လူထုဦးလှရေးခဲ့တဲ့စာအုပ် အမှာစာမှာ ရွှေကိုင်းသားကရေးပါတယ်။ သတင်းစာတွေထဲက နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ နောင်တချိန်မှာ ရာဇဝင်တွေဖြစ်လာတယ်လို့။
ဦးလှစာအုပ်တွေကို ထပ်ထုတ်တော့ တ နေရာတွေမှာ တစ် လုပ်ကြရင်တော့ ရာဇဝင်ရိုင်းပါလိမ့်မယ်။
- အစဉ်အလာဖျောက် အရင်စာပျောက်
- အတွေးအကြံကောက် အရေးမှန်ဖျောက်
- ဖျောက်ချင်တာဖျောက်၊ ပျောက်ချင်တာပျောက်
- ဖျောက်တိုင်းမပျက်၊ ဖျက်တိုင်းမစင်
- ရာဇဝင်ရိုင်း သွေးသမိုင်းကို
- ပြည်သူတွေ တွေးတိုင်းတွေးတိုင်း နာကျည်းစေ။
မှတ်ချက်။ အောက်ဆုံး လေးကြောင်းက မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ကဗျာထဲကဖြစ်ပါတယ်။
စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ၈ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
စာဖတ်သူတို့သည် ဤ ‘စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဝတ္ထုကြီးထဲ၌ စစ်၏ကြောက်ဖွယ်သဘာဝကို မြင်ကြရလိမ့်မည်။ စစ်လူတန်းစား၏ အမူအကျင့်တို့ကို တွေ့ကြရလိမ့်မည်။ စစ်၏သားကောင်များသရုပ်ကို ဖတ်ရှုကြရလိမ့်မည်။
“စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဝတ္ထုကြီးသည် စစ်နှင့်စစ်လူတန်းစားကို စွဲဆိုလိုက်သော စွဲချက်ကြီးတခုဖြစ်သည်” ဟု ကမ္ဘာကျော် အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး အီး၊ အမ်ဖောစတားက ရေးခဲ့၏။
အီး၊ အမ်ဖောစတားက ပြောသကဲ့သို့ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ဝတ္ထုကြီးသည် ‘စွဲချက်ကြီး’ တရပ်ဟုဆိုလျှင် ထိုဝတ္ထုကြီးထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်စစ်ပွဲများသည် ‘ရာဇဝတ်မှုကြီး’ များဖြစ်ကြရပေလိမ့်မည်။ ထိုဝတ္ထုကြီးထဲတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြသည့် နပိုလီယန်၊ အလက်ဇန်းဒရားအမှူးပြုသော စစ်လူတန်းစားတရပ်လုံးသည် ‘တရားခံများ’ ဖြစ်ကြရပေလိမ့်မည်။့့
‘စွဲချက်ကြီး’ တစ်ရပ်လို့ မရေးခဲ့တဲ့၊ စစ်လူတန်းစားတစ်ရပ်လုံးသည်လို့ မရေးခဲ့တဲ့ ဆရာမြသန်းတင့် သတ်ပုံမှားပါသလား။ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ ခန်းဆောင်နီအိပ်မက်အပါအဝင် နောက်ထုတ်စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ (တစ်) တွေနဲ့သာ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။
မြန်မာစာ ၂၁ ရာစုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရပါစေသည်း။